SIDA LOO DOORTO SHARCI-YAQAANADA SI AY U BIXISO: NOOCYADA SHARCI-YAQAANADA, MOODOOYINKA CAANKA AH, SHURUUDAHA XULASHADA - MISHIINADA GAARKA AH
Dalal badan oo horumarineed oo ka socda Dunida Dunida ayaa leh, tirada cawska caan ah waxaa loo aaneyn karaa oo kaliya kuwa si joogta ah u gooyey 200 sano. Maalmahan, waa ay adag tahay in la rumaysto in milkiilaha milkiilaha uu ku qarash garoobayo waqtigan qiimaha leh. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah daryeel ku haboon, dusha sare iyo cawska cagaaran ayaa soo baxaya oo keliya hal sano kadib markii la furo.
Khubaro badan ayaa sheegaya in cawska oo la mid yahay timo - marar badan ayaa timo la soo saaraa, ka sii dhumucdiisuna way koraysaa. Si kastaba ha ahaatee, tan, dabcan, waa inaad doorataa qalabyada khaaska ah ee saxda ah.
Dabcan, qalabadii hore ee sida bareegga dhaqameedka waa in laga tagaa, sababtoo ah iyada oo aanad heli karin cawska saafiga ah ee sababa jilicsanaanta wanaagsan. Laakiin ha ka welwelin, sababtoo ah farsamooyinka casriga ah ee tiknoolajiyada khaaska ah ma siinayo fursad ay milkiilaha cawska ahi ka fogaadaan horumarka.
Dhamaan noocyada cawska cawska ah waxaa si caadi ah loogu qaybiyaa laba kooxood oo waaweyn: gaas iyo koronto. Koox kastaa, marka loo eego, waxay ku jiri karaan noocyo dhowr ah, oo ku kala duwan qaababka naqshadeynta, xaddiga, mabda'a hawlgalka iyo dabeecadaha kale.
Ma taqaanaa? Cawskii cawska ahaa ee ugu horreeyay ayaa lagu soo rogay 1830kii magaalada yar ee Stroud (England). Hantidhawrku wuxuu ahaa Edwin Baird Bading, oo waqtigaa ahaa weriye fudud oo ka socda warshad tafaariiqeed. Nooca koowaad ee qalabkani wuxuu ahaa mid aad u culus oo qaali ah, tan iyo markii laga sameeyey bir bir ah.
Si loo fahmo hannaanka cawska cawsku uu ka fiican yahay - gaaska ama korontada iyo sida loo doorto cawska cawska si sax ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo sifooyinka ay ku soo bandhigeen qodobkan, iyo sidoo kale xaaladaha hawlgalka la filayo (qadarka shaqada iyo cabbirka aagga la daaweynayo).
Baahida loo qabo cawska cawska ee dalka
Baahida loo qabo in loo isticmaalo qaan-gooyaha adeegsigeeda waxaa lagu go'aamiyaa si fudud, oo ku saleysan xuduudaha aasaasiga ah. Dabcan, ku dhowaad kasta oo degan xagaaga iyo milkiilaha shakhsi ahaaneed wuxuu rabaa in uu lahaado qalab noocaas ah, laakiin kharashka qalabkan oo kale ah ayaa muhiim u ah inuu noqdo mid muhiim ah oo macquul ah su'aasha baahida. Ugu horreyntii, waa in la fahamsan yahay in iibsashada cawska cawska ah ee isticmaalka ama daaweynta qayb ka mid ah cawska waa mid aad u macquul ah, maadaama ay tahay mid aad u dhaqaale badan oo lagu dalbanayo daaweyn noocaas ah oo takhasus leh.
Waa muhiim! Waa wax aan loo baahnayn in la riixo munaasabadaha iyo isla markaa la gooyo cawska dheer ee xididka. Sida ku xusan talooyinka guud, waa mid nabdoon in la barbar dhigo ugu badnaan saddex meelood oo ka mid ah wadarta guud ee cawska ee hal mar. Tani waxay macquul ka dhigeysaa in cawska laga ilaaliyo ba'an iyo in aaney carqaladeynin koritaankooda. Ku guuldareysiga in la raaco xeerkan badanaa waxay keenaysaa hurdi xawaare ah oo ah daboolka cawska.
Tixgeli tani, waa in lagu qanciyaa mid ka mid ah noocyada ama mid kale oo ku jira qalabkaaga kaliya ee kuwa si joogta ah oo taxadar leh u ilaaliya xaaladaha cawska, oo guud ahaan guud ahaan caleenta cawska ah uma oggolaanayso in tayada sare ee habka kale ee la heli karo.
Ma taqaanaa? Cawska cawsku wuxuu leeyahay hal rooti oo waaweyn iyo caleemo dhowr ah taas oo dhirta neefsanayso. Sababtan darted, cawska ugu dayacmay waa suurad wacan in la gooyo dhowr marxaladood, iyadoo la hayo fasax 2-3 asbuuc.
Si kastaba ha noqotee, qof kastaa waa inuu fahamsan yahay in cawska cawska, sida qalab kale oo qalabaysan, u baahan yahay dayactir haboon iyo u hoggaansanaanta xeerarka amniga.
Noocyada cawska cawska ah si loo siiyo
Horumarinta horumarka farsamo ayaa saameeyay dhammaan dhinacyada saamaynta iyo isdhexgalka nolosha aadanaha, sidaa daraadeed ma ahan wax la yaab leh in ay sidoo kale taabatay arinta daryeesha gareynta iyo dacha. Horeba, noocyo badan oo cawska cawska ah ee noocyada kala duwan, ayaa ku kala duwan qaabeynta, nooca mootada, awoodda, naqshadeynta iyo xuduudaha kale, ayaa lagu soo bandhigay dadweynaha. Marka la eego arrintan, maahan wax la yaab leh oo aan jirin wax xulasho caalami ah.
Qalabka cawska ugu fiican ee dacha - mid ka mid ah baahiyaha macaamilka oo si buuxda u tixgeliya xaaladaha hawlgalka la soo jeediyay (nooca cawska, cawska, dhulalka iyo kuwa kale).
Ma taqaanaa? Qodobka guud ee la aqbalo ee "cawska cawska" waxaa ka mid ah qalabka loo isticmaalo in laga saaro oo la jaro dhirta xad dhaafka ah. Dhab ahaantii, waxaa jira saddex nooc oo qalabkaas oo kale ah, oo ay ka mid yihiin ciribtirka laftiisa, laf-dhabarka iyo cows-ka. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay qaabka u gaarka ah ee qaabeynta iyo hawlaha, iyo sidoo kale codsiyo gaar ah.
Inkasta oo uu leeyahay sumcad ballaaran ee noocan oo kale ah qalabka, ma bannaanka u yaqaan badan yaqaan magaca magaca wax-dhaqdhaqaaqa. Buugan, waa mid la qaadi karo, wax ka bedelida taleefanka gacanta ee mulkiilaha ayaa la yiraahdaa "trimmer".
Moodooyinka gacanta ee cawska cowsku waxay ku kala duwan yahiin qadarkooda yaryar, meeleyn ku habboon ee hababka xakamaynta iyo roonaanta isticmaalka shakhsiyeed markaad ka shaqeyneyso meella yar.
Sida moodooyinka kale, trimmers waxay yeelan karaan gaas ama koronto koronto. Farsamooyinka gooyuhu waxay ku taaganyihiin qaybta hoose ee hanti-dhowrka waxayna ku xiran tahay fiilooyinka mashiinka wadada lagu rakibay qaybta sare ee qofka heysta. Qaybta waxaa lagu daray qalab xakameyn ah, adoo sidoo kale ku dhejinaya hanti. Faa'iidada ugu muhiimsan ee ka midka ah dadka gawaarida u leh waa awoodda lagu maareeyo cawska meelaha ugu caqli badan, halkaas oo cawska ay xuduudaha ka baxaan, dhirta iyo noocyada kala duwan ee dayrarka. Tan waxaa hubineysa joogitaanka ilaalin khaas ah (khaanad) ee maqdhaha, taas oo ka hortageysa khasaare shil ah.
Waa muhiim! Intii lagu gudajirey mashruuca gawaarida, maaddooyinka halista ah iyo halista waxaa loo sii daayaa heerar kala duwan oo jawiga ah, taasina waa sababta loogu talagalay in loo isticmaalo isticmaalka difaaca dhegaha iyo maskaxda gaar ah markaad shaqeyneyso.
Moodooyinka xarkaha waxaa loogu talagalay wax soo saarka wax soo saarka caleenta cawska ah ee waaweyn, laakin kaliya dusha sare ee dusha sare leh.. Xaaladdan oo kale, hawlwadeenada sharciga ah waxay ubaahan tahay in ay makiinada hore u riixdo oo ay hagto dhaqdhaqaaqeeda.
Qaar ka mid ah wakiilada qashin-gareynta cawska leh ee dhoobada leh waxay ku shaqeynayaan shaqeynta mulching ee cawska gooyo ama weel sumaysan oo loogu talagalay ururinta. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay xaqiiqda ah in mashiinnada mootadu aanay ku habooneyn qashinka duurka, sariiraha ubaxa, geedaha iyo geedo kale.
Waa muhiim! Qawaaniinta amniga waxay ku qasban yihiin inay isticmaalaan qalabyada kabaha caagagga ah kuwaas oo ka ilaaliya shoog koronto iyagoo la shaqeynaya habka korontada ee korontada ku shaqeeya. Waa in aynaan dayacin taladan, sababtoo ah waxay badbaadin kartaa nolosha.
Raiders waa tareen yar oo loogu talagalay cawska cawska. Waxay ku kala duwan yihiin awoodda sare ee mashiinka baaskiilka ee korontada ku shaqeeya iyo awoodda ay u leeyihiin in ay ka shaqeeyaan meelo ballaadhan oo daboolan, si deg deg ah oo sax ah.
Cawska cawska-cawska ayaa lagu qalabeeyaa kursi raaxo leh oo loogu talagalay darawal-gacmeedka iyo aaladaha badbaadada ee damaanad qaadaya ammaanka qofka inta lagu jiro gareynta. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah shaqaaleeyayaasha ayaa ah shaqadooda kordhay - marka lagu daro jawiga, waxay sidoo kale cawska ku daadiyaan ama ku ururiyaan weel gaar ah oo lagu rakibo dhabarka.
Dad badan oo runtii u baahan ceymiska noocan oo kale ah, ma yaqaanaan sida loo doorto makiinada batroolka saxda ah ama dabka korontada. Xaqiiqdii, marka lagu daro rabitaanka shakhsiyadeed ee qofka, waa in uu tixgeliyaa oo kaliya shuruudaha ugu muhiimsan: nooca cawska, aagga cawska iyo cirridka beeraha. Balse sidee ayuu cawska cawsku u tixgeliyaa arrimahan? Maxaad ka dooran kartaa noocyo kala duwan iyo ikhtiyaaro?
Waxay ku taal nooca iyo nooca cawska cawska koraya ee ah in waxqabadka qashinka cawsku waa inuu marka hore ku tiirsanaado. Sidaas awgeed, cawska jilicsan ayaa waxaa jiri doona qulqul ku filan oo leh mishiin awood leh. Iyo qashinka cawska dheer ee cawska kuleylka ah, marka hore, waxay ka wanaagsan tahay inaad samayso doorasho ku habboon qaab shidaal oo xoog leh.
Markaad dooranayso cirib-yaraha goobtaada, waa inaad tixgelisaa aagga ceymiska. Goobaha yaryar waxaa si sahlan loogu shaqeyn karaa qalabka gacanta lagu qaato ama muraayad yar yar oo ah cawska cawska. Qalabka ugu dambeeya wuxuu sidoo kale ku haboon yahay shaqaynta sawirada leh aag guud oo ka kooban 3-4 hektar. Qadar badan oo shaqo ah ayaa lagula talinayaa in lagu aamino qaabka muraayadda oo leh mashiinka awoodda badan ama xitaa qulqulka cawska.
Xulashada nooca qaybta waxay sidoo kale ku xiran tahay dhulka, taas oo ah, xaaladaha hawlgalka ee dhabta ah. Sidaa daraadeed, daaweynta goobaha ku yaal meelo yaryar ama leh tiro badan oo niyadjab kala duwan iyo isdaba-joog ah ayaa si wax-ku-ool ah gacanta ugu qabta mashiinnada mashiinka cawska. Waxay sidoo kale ku talinayaan in ay isticmaalaan marka cawska laga sameeyo geedo, ubaxyo iyo dhir kale. Goobta furan ee furan, cawska ayaa si sahal ah, waxtar leh oo degdeg ahna ugu adeega mashiinnada miiska ama gawaarida.
Ma taqaanaa? Dhirta cawska casriga ah waxaa loo isticmaali karaa noocyo badan, xitaa beeraha. Sidaa daraadeed, moodooyinka shakhsiyadeed waxay suurtogal u yihiin suurtagalnimada in goosashada saxda ah ee cawska la jajabiyo si loogu sii quudiyo xoolaha Cawska cawska ah ayaa leh sanduuq gaar ah oo loogu talagalay ururinta cawska cawska iyo qalabka wax lagu jiido.
Maxaa kale oo la raadinayo markaad dooranayso curyaan
Bixinta feejignaanta astaamaha aasaasiga ah ee cutubkan, waa inaadan iloobin shuruudaha kale, taas oo wax badan oo awood u leh inay horay u soocaan nooca cawska cayayaanka loo baahan yahay: koronto ama gaas, iyo waxa xaddidaya ay tahay inuu leeyahay, isbedelka iyo qaybaha.
Mid kasta oo beereedku waa inuu ugu yaraan ugu yaraan laba mindhicir u yahay sida caadiga ah: qashinka cawska (oo leh mawduuc midab leh) iyo mulching. Waa mamnuuc in la badbaadiyo qaybahaas, maaddaama xawaaraha sare ee wareegga iyo iska-caabinta ay sameeyeen marka ay la socdaan afduubyada waxay muujiyaan dusha mindhicirka si aad u weyn. Sidaa daraadeed, mindhicirka la doorto ee la doorto waa inuu buuxiyaa heerarka ugu sareeya ee tayada iyo mudnaanta.
Waa lagama maarmaanka ah in mindiyaha iyo meelaha ay ku xiran yihiin cutubka ay si taxadar leh u dheellitiran yihiin si loo tirtiro suurtagalnimada wixii khalad ah iyo khalkhalgelinta shaqada illaa fashilka.
Awoodda tamarta waa mid ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan. Dabeecaddani waxay go'aamisaa soo gudbinta cutubka, waxqabadkeeda. Waxaa xusid mudan in kor uqaadayaasha korantada ah ee bixinta, iyada oo la tixgelinayo awooda, ay si muuqata u lumi doonaan shidaalka shidaalka.
Awooda baabuurtu waa inay ahaato mid aan ku filnayn oo keliya, laakiin sidoo kale xad-dhaaf ah. Xaqiiqdu waxay tahay haddii cawska uu aad u sarreeyo, mindiyaha ayaa laga yaabaa in macaanka iyo mishiinka uu jiri doono, taas oo ah, cawska cawska ayaa gubi kara.
Qalabaynta cawska waa in la xushay iyadoo la tixraacayo awoodda la xisaabiyay iyada oo 15-20% margin.
Baaxadda qashinka lagu daaweeyo iyo awoodda loo leeyahay in lagu hagaajiyo dhererka cawska
Tilmaame-yaashan waxay soo saartaa tirada guud ee kaararka si loo dhamaystiro waxtarka guud ee qaybta cawska. Baaxadda weyn ee width wuxuu si weyn u badbaadin karaa shidaalka. Cawska qoyan ee hoyga, sida caadiga ah, habka ilaa 40 cm width, iyo qaababka xirfadeed ilaa 55 cm.
Qalabka wax lagu isticmaalo
Ka hor intaadan dooran doogga korantada ee korantada ama unugyada gaasta isku midka ah, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo waxyaabaha ay ka kooban tahay qaybaha ugu muhiimsan.
Bacaha - mid ka mid ah qalabka ugu caansan ee soo buuxiya shuruudaha waxtarka iyo iftiinka. Awood u leh inuu u adkeysto culays yar iyo xagasho. Si kastaba ha ahaatee, looma jeedo in lagu isticmaalo jawi adag.
Birta waxay bixisaa difaac lagu kalsoonaan karo oo ah qaababka jirka ee muhiimka ah. Si fudud u horjoogsanaya burooyin, isku dhac iyo xoqid. Tani waxay la mid tahay, waxay si xun u dulqaadanaysaa xaaladaha kaydinta iyo hawlaha aan ku filnayn, oo lagu daboolay daloolka. Qalabka noocan ah ee kiisaska waxaa loo isticmaalaa si aad u dhif ah.
Aluminium - calaamad aad u wanaagsan oo iftiin leh iyo kalsooni. Qulqulayaasha ku jira cimri dheeraada iyo difaac lagu kalsoonaan karo oo ka dhan ah dunta. Inta badan waxaa loo isticmaalaa tiknoolajiyada xirfadlayaasha ah.
Muraayadaha waa in laga sameeyaa wax tayo sare leh, ee aan ahayn qasab caag ah. Preference waa in la siiyaa wheels ee dhexroorka ballaaran, maadaama ay taasi fududeyneyso dhaqdhaqaaqa cawska cawska ah ee cawska. Sidoo kale, qodobadani waxay u dhigmaan cutubka si loo kabo meelo adag.
Marka la eego xulashada gawaarida lagu rakibay rinjiyeynta ama duurka qafis, waxaa fiican inaad bixiso doorbididda kulamada kiniisadaha, maaddaama ay yihiin kuwo aad u adkeysan, xirxiran-adkeysi lehna waxtar leh.
Kombiyuutarada iyo bacaha
Dabcan, joogitaanka qashin-qaadayaasha, qaab-dhismeedkooda iyo cabbirkooda guud wax saameyn ah kuma yeelanayaan howlgalada caws-maskaxeed, laakiin tilmaamahani waxay go'aamiyaan heerka raaxada ee isticmaalka shakhsi ahaaneed.
Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la doorto ururiyaha dhismaha adag, taas oo fududeyneysa ka saarida cawska cawska cowska iyo fududeynaya habka nadiifinteeda. Miisaanka yar ee miisaanka marka la barbardhigo qaababka kale ee caleenta cawska ayaa ah mid aan macquul ahayn oo aan sabab u lahayn dhibaatada.
Geedka xayawaanka sii deynaya
Doorashada ugu caansan ee cawska cawska ah ee leh ciriiriga gawaarida cawska. Naqshadani waxay tirtiraysaa baahida loo qabo in la ururiyo cawska. Si kastaba ha noqotee, haddii ay tahay inaad ilaaliso cawska qoyan oo qoyan, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa cutubyo leh dheecaan dhinaca.
Jiritaanka gawaarida ma aha mid caadi ah moodooyinka ugu hooseeya ee cawska cawska, sidaas darteed, shuruudahan ayaa ku habboon in la tixgeliyo marka la dooranayo raider.
Qalabka la rakibay wuxuu u fududeeyaa ciriiriga si uu u dhaqaaqo agagaaraha isla markaana kor u qaado geeddi-socodka. Sanduuqyo badan ayaa qaali ah oo samaynta doorashooyin ku salaysan moodooyinka noocan oo kale ah waxaa lagula talinayaa oo kaliya marka ay jiraan xaaladaha meelo waaweyn ee cawska.
Moodooyinka caanka ah ee cawska cawska
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in aysan jirin moodooyinka guud ee cawska cawska sababtoo ah arrimo badan oo kala duwan, waa wax adag oo aan fiicnayn in lagu taliyo moodooyinka qaar. Si kastaba ha ahaatee, weli waa suurtogal in la kala saaro warshadaha shakhsiyaadka, kuwaas oo sannado badan soo saaraan cawska cowska ugu fiican, inay ku jiraan booska hoggaanka sare ee qiimaynta baahida macaamiisha.
German Al-ko - shirkad isboorti oo caalami ah oo bixisa mashiinka gaasta ee moodooyinka iyo naqshadaha kala duwan. Unugyada shirkadaha waxaa lagu soo saaraa iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah oo ka tirtiraysa qaylada xad-dhaafka ah, ciyaarta, dhibaatada iyo dhibaatooyinka mindhicirka. Sanduuqa ururinta ee cawska caynkan oo kale ah waxaa lagu qalabeeyaa tubaako hawo ilaalinaysa qalabka ka soo kabashada iyo buuxinta. Al-ko cawska cawska ee Jarmalka waa mid u fiican cayayaanka.
Shirkadda Jarmalka MTD - waa kan ugu weyn caalamka ee qalabka beerta. Dhammaan qaybaha jidhka ayaa si khaas ah uga sameysan alaabooyinka aluminium ee tayadoodu sarayso waxayna socotaa heerar kala duwan oo ku saabsan baadhista warshadaha. Nolosha adeegga ee qaybaha - in ka badan toban sano. Dhammaan qalabkii shirkadda ayaa lagu kala gooyay gogol diyaarsan oo loogu talagalay in lagu soo ururiyo geedo. Waxay ka hortagtaa cawska in ay ku faafaan dhinacyada.
Shirkadaha Swedishka Stiga iyo Husqvarna - Kuwa soo saaray aqoonsiga qalabka beerta gaaska. Maaddaama baabuur loo isticmaalo makiinada American. Waxay ku adkeyneysaa dareenka leh guryo adag oo laga sameeyay birta iyo giraangirro balaadhan oo ku dhegan kubbadda. Waad ku mahadsan tahay naqshad sameynta karti leh Shirkadaha miro-dhalinta ee cowsku waa kuwo daba-dheer, sahlan oo sahlan in la shaqeeyo
Shirkadda Talyaaniga Oleo-Mac - Waa shirkad caalami ah oo ka kooban unugyada korantada iyo gaaska. Marka la eego xogta jirta, korontada korontada ugu fiican ayaa waxaa soo saaray shirkadan. Wuxuu isku daraa tayada sare ee Yurub iyo kalsoonida. Отличается изысканным внешним видом и ценовой доступностью. Оборудование компании легко настраивается под любые эксплуатационные условия и требуемые параметры (высота газона, угол среза и другие).Hayso sanduuqa aruurinta iyo shaqeynta caleenta.
Waa muhiim! Waxaa aad loogu talinayaa in laga iibsado cawska cawska ee dukaamada khaaska ah. Keliya waxay bixiyaan dammaanad buuxda iyo adeeg habboon muddada oo dhan.
Waad ku mahadsan tahay shuruudaha qalabka kor ku xusan, xulashada saxda ah ee gaasta gaaska ama dabka korontada ayaa qof waliba heli kara. U hoggaansanaanta talooyinkan waxay u oggolaan doontaa milkiilaha cawska cusub inuu abuuro on ay goobta u gaar ah daboolka cawska ah ideal, faraxsan isha.